Global Voices teny Malagasy » Alzeria sy Ejipta: Efa tsy resaka baolina fandaka intsony · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Novambra 2009 21:42 GMT 1	 · Mpanoratra Tarek Amr Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Alzeria, Ejipta, Ady & Fifandirana, Fanatanjahantena, Fifandraisana iraisam-pirenena, Media sy Fanoratan-gazety, Politika, Vaovao Mafana, Zavakanto & Kolontsaina
Manoratra ireny tsahotsaho ireny ao amin'ny bolongany El Journaljy  i Ihab Omar:
Taorian'izany dia nandà ny fisian'izany ny Ambasadera Alzeriana ka nilaza fa tsy nisy Alzeriana maty izany tany Ejipta. Saingy araka ny nosoratan'i Inferad  ao amin'ny bolongany, dia tsy nahasakana ny fielezan'ny tsaho sy ny herisetra niaraka taminy io fanambarana io.
Nandritra sy taorian'ny lalao tany Ejipta moa dia mbola nilamina ny tontolom-bolongana Ejipsiana. Nanoratra ny mpamaham-bolongana tahaka an'i Nile Wise  fa lalao baolina fandaka fotsiny iny ka tsy tokony hanao zavatra mihoam-pampana ny olona:
Nanambara ny bolongana tahaka an'i Inferad  fa ny fampahalalam- baovao eo amin'ny firenena roa tonta no mendrika hotreronina. Niangavy ny olona eo amin'ny firenena roa tonta izy tsy hinohino fahatany izay vakìny sy henony:
Misy ihany koa ny mpamaham-bolongana hafa tahaka an'i Al Journaljy , no manaiky ny fisian'ny herisetra nisy eo amin'ny firenena tsirairay natao tamin'ny mpankasitraka ny hafa:
Ary izao ihany koa no nanoratan'i Daily Barid  avy hatrany:
Misy ny mpamaham-bolongana manahy fa hisy herisetra hihatra amin'ny mpijery baolina Ejipsiana any Soudan. Izany no nahatonga an'i Lokmet Eish  miantso ny mpitandro ny filaminana hiaro ny mpanohana sy ny mpilalao Ejipsiana any:
Nanao izay ho afany ihany ny Sodaney hifehezana ny kianja tamin'ny nandefasana miaramila miisa 15 000. Saingy efa nivadika moa ny toe-draharaha ka na dia maro tahaka izany aza tsy mbola ampy hahafehy ny raharaha. Nosoratan'i Zeinobia  ao amin'ny bolongany izay nitranga:
Eto  ihany koa dia nanoratra izay nitranga tany Soudan i Bani Adam Maa Waqf El Tanfeez. Nosoratany ny lahatsary iray nivoaka an-tserasera nampitandrina ny Ejipsiana tsy hankany, ary misy ahitana ireo mpankasitraka Alzeriana mitondra antsy eny an-tanany:
Manoratra ato  izay nolazain'ny manam-pahefana Ejipsiana i Zeinobia:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/11/22/4263/